Vertical Yokuchinja nokurumanya Lathe Machine
Multiple Station Kutamisirwa Machine
Chinjikira Kutamisirwa Machine
Vertical Uye Horizontal Kutamisirwa Machine
Vertical Kutamisirwa Machine
End Mill mukuyi
zvishoma nezvishoma mumatope Table
Chokwadi, tinogona kupa mapepa akawanda kusanganisira CE, ISO9001, Zvitupa An
alysis / Conformance; Insurance; Origin, uye zvimwe zvinyorwa ekisipoti apo kunodiwa.
We rasai ISO9001 uye CE certifciation.
Zvakadini nounhu hwako?
Kubva patani kusvika kugadzirwa, Aqua hwemberi mukugadzira Quality utariri gadziriro iri revatema kupinda ose nzvimbo yedu basa. Real-nguva kuongorora uye chidhiraivho dzinoitwa munyika kugadzirwa muitiro, kuvimbisa zvinhu zvedu 'zvachose unhu. Aqua-Tech zvakaisvonaka kunozivikanwa vakawanda certifications uye accreditations yedu huru vemapato.
Sei pamusoro wako Machine Service?
mutengi yedu rubatsiro kuongorora zvirevo zvenyu pamusoro munhu zvichienderana hwaro Panguva dzose mukugadzira, kubudiswa uye logistics. Pamusana yedu kuparadzirwa nzvimbo, mashoko maitiro uye chichiitika pakati kuchinja kukura uye kugadzirwa, isu optimize mutobvu uye pakusununguka nguva kuti zvinhu zvenyu.
vachizvitakudza Our chiteshi: Xiamen chiteshi. Kana vamwe China chengarava sezvawakautarira requirements.The vatungamirire nguva kazhinji mazuva 20-60 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Special chinangwa muchina achava kukurukura. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana kwedu kutungamirira nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa ne Kutengeswa wako. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Nokuteerera iwe uye kuva nguva dzose zvinowanikwa Panguva yose muzvirongwa dzenyu, rokutengesa edu uye hwokugadzira rubatsiro zvikwata mazano uye kuwedzera chaizvo kubatsira ukoshi.
Pneumatic Vice shaya , Collet Clamping, Floor Spring Glass Door Machine, Cnc Vice Spindle Collet, Drilling Tapping Machine,